Dzimwe nguva iyo Windows Installer anogona kusangana glitches. Imwe yakadaro glitch uko iyo Windows Gadziridza Standalone Installer, Windows Defender uye Windows Firewall inokanda kukanganisa iri 0x80070424 Iyo sevhisi yakatsanangurwa haipo seyakaiswa sevhisi. Izvi zvinogona kukanganisa kuwanda kwekushandisa.
Windows Gadziridza Standalone Installer, Installer yasangana nekanganiso 0x80070424, Sevhisi yakatsanangurwa haisipo seyakaiswa sevhi.
Iko hakuna chikonzero chaicho cheiyi nyaya, asi kumwe kunoshanda kwakaratidzirwa kuve kunoshanda kune izvi munguva yakapfuura.
Tichave tichitarisa izvo zvinotevera kugadzirisa kugadzirisa iko kukanganisa:
Run the the Windows Gadziridza Troubleshooter.
Dzokororazve Windows Nguva Yebasa.
Kutangazve kunetsekana Windows Services.
Dhawunirodha uye gadza yazvino Windows Gadziridza Mumiriri.
Run the the Windows Firewall Chinetso.
1] Fambai Windows Gadziridza Troubleshooter
2] Dzokororazve Windows Nguva Yebasa
Run Run Command Prompt as Mutungamiriri uye ita mirairo inotevera:
mambure mira W32time W32tm.exe / unregister W32tm.exe / rejista net kutanga W32time
Zvino, mirira kusvikira yati - W32Time yakabudirira kunyoreswa.
3] Kutangazve kunetsekana Windows Services
Mune yakakwira Command Prompt, mhanya unotevera mirairo, imwe mushure meimwe:
SC config wuauserv kutanga = auto SC kurongedza mabheti kutanga = auto SC kurira cryptsvc kutanga = auto SC kumirira yakavimbika kutanga = auto
Izvi zvichaona kuti iyo inodiwa Services inowanikwa.
4] Dhawunirodha uye Isa iyo Windows Gadziridza Mumiriri
Unogona zvakare Dhawunirodha uye Isa izvo zvazvino Windows Gadziridza Mumiriri uye chengetedza kana izvozvo zvinogadzirisa nyaya dzako.
5] Gadzirisazve Windows Gadziridza Zvikamu
Iwe unofanirwa kuverenga reset yega yega Windows Gadziridza chinhu kuita default uye woona kana izvozvo zvichibatsira.
Mushure maizvozvo, dzokerazve Winsock.
Iye zvino chengetera Mavandudzo pakombiyuta yako uye chengorora kana kukanganisa kwakagadzirirwa.
6] Fambai Windows Firewall Chinetso
Run the the Windows Firewall Chinetso uye ona kana zvichikubatsira. Izvi zvinokubatsira iwe kugadzirisa uye kugadzirisa Windows Firewall matambudziko otomatiki. Ona kana ichiwanikwa kune yako Windows kana kana yakavakirwa-mukati.
Kodhi yekodhi 0x80070424 ye Windows Kwidziridzo, Chitoro cheMicrosoft pa Windows 10
Microsoft Store Yakanganisa 0x80D03805 pa Windows 10